I-TinyCal - Ikhalenda le-Google ne-Apple le-Mac | Plum Amazing
Okusheshayo: 3 / 11 / 20
Ukufinyelela okulula nokubukwa kweGoogle noma Ikhalenda le-Apple, ngqo kusuka ku-menubar. Engeza imicimbi, izikhumbuzi, izinketho eziningi. Ingakhombisa izinyanga eziningi, isebenzise amakhalenda wangokwezifiso, ikhombise amaholide avela emazweni amaningi kanye namakhalenda amaningi omuntu siqu / webhizinisi.
I-TinyCal inezici eziningi eziwusizo.
Ikhalenda le-Apple libuka ngokushesha ikhalenda elincane nokufinyelela okuvela kumenyu ye-Mac
I-Google Khalenda ibheka ngokushesha ikhalenda elincane nokufinyelela okuvela kumenyu ye-Mac
Ukusekelwa kwamagajethi we-Google Khalenda
Okulungisekayo ukubonisa inyanga
Okulungisekayo ukubonisa umcimbi
Dala futhi ususe imicimbi
Izinombolo zeviki le-ISO 8601
Imbondela yekhalenda lesibili
I-TinyCal idinga iMac OS X 10.9 noma eyakamuva. Ukuhlanganiswa kwe-Google Khalenda kunikezwa yi-Google.
Kuboniswa Izinyanga Eziningi
I-TinyCal ingenziwa ngezifiso ukukhombisa izinyanga ezi-1, 2, 3 noma 12 ngasikhathi sinye. Isibonisi singahlelwa njengobude noma ububanzi.
I-TinyCal ingabonisa amakhalenda e-Google asesidlangalaleni ngamaholide amazwe ahlukene angama-40, ukusuka e-Australia kuya eVietnam. Ingakhombisa nemicimbi kusuka ku-Google Khalenda yakho yangasese. Isithombe-skrini esilandelayo sibonisa amaholide avela e-USA ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nekhalenda lomuntu siqu ngokubomvu.
I-TinyCal ingenziwa ngezifiso ukukhombisa amanye amakhalenda, afana neBuddhist, Hebrew, Islamic, kanye neJapan. Isithombe-skrini esilandelayo sikhombisa ikhalenda lesiHeberu ngamaholide amaJuda.
Iwindi le-TinyCal liyimenyu yezinyembezi engabekwa kabusha noma kuphi esikrinini.
Ewindini le-TinyCal, usuku lwanamuhla luzungezwe. Ngaphezu kwalokho, uma kukhona izehlakalo ezenzeka namuhla, ziyakhonjiswa kusithonjana se-menubar. Ku-skrini elandelayo, unxantathu oluhlaza okwesibhakabhaka ngakwesokudla ngezansi ukhombisa ukuthi kukhona umcimbi namuhla.
Izilawuli eziyisisekelo zikhonjiswe kusithombe-skrini esingezansi.
- kungezwe osayizi abasha abayi-2 ku-tinycal, emikhulu naku-jumbo.
- wenza imicimbi imigqa emi-2
- imicimbi manje inesikhathi sokuqala nokuqeda
- Khombisa isikhathi samahora angama-24 noma angu-12 (AM / PM) ngokuya ngezilungiselelo zohlelo.
- Ikhalenda le-apula alibonisi abanye abasebenzisi. kulungisiwe.
- inikwe amandla isikhathi sokusebenza esinzima
- ezinye izinguquko ze-misc
- kulungiswa kumanuwali
- Ukulungisa ukubonisa inyanga kukhalenda le-tinycal kumodi emnyama.
- izimvume ezithuthukisiwe zokufinyelela amakhalenda e-google nama-apula
- Ukubonisa okungaguquki kwedatha ngosayizi abakhulu bekhalenda
- isebenza kahle ku-mojave mac os 10.14
- Ukulungiswa kumodi emnyama
- misc. izinguquko zokwanelisa ukuphepha okusha kwe-apula
- ukuhlanganisa ukukhishwa kulungisiwe
- i-tweak encane yokwenza isheke lisebenze ngezibuyekezo futhi ukwazi ukusetha isikhathi sokuhlola, nsuku zonke, masonto onke noma nyangazonke.
- hlola izibuyekezo (ukucwazimula) manje kuyasebenza. ungasetha futhi isikhawu. okokuqala ungadinga ukulanda ngesandla.
- ui uyashintsha.
- lungisa ukuphahlazeka ekukhetheni ikhalenda le-apula.
- manje isekela iKhalenda le-Apple! khetha noma ikhalenda le-Apple noma le-Google kuzintandokazi.
- kungezwe amakhalenda angeziwe weGoogle Khalenda. kufaka phakathi amakhalenda kazwelonke, ezenkolo, ezemidlalo kanye nama-misc. Kuyasiza kakhulu.
- Izinguquko eziningi ezincane nokuthuthuka.
sibonga bonke abasebenzisi ngeziphakamiso zakho nokulungiswa kwamaphutha! kusiza ukuvela kohlelo lokusebenza.
- Ukuthuthuka kokungena ngemvume kwekhalenda le-google
- Ukukhishwa kwesithonjana nge-retina display kulungisiwe
- Kulungiswe ngesixhumanisi sebhokisi lebhokisi
- izintandokazi manje zivulekele kunoma yisiphi isikhala noma ngabe izintandokazi sezivele zivulekile kwenye indawo
- izinguquko eziningi ze-ui ngaphezu kwalezi zinguquko izolo
- manje ihlanganisiwe futhi isebenzisa i-api yakamuva yeGoogle
- ihlanganiswe ne-xcode yakamuva.
- okunye ukuthuthukiswa kwe-ui
- dala umcimbi loop ulungisiwe.
- ezinye izimbungulu
- Izinguqulo manje ze-shareware (esitolo se-plum esimangalisayo) nesitolo sama-apula (lapho bethola ukubuyekezwa kuphelile).